Isixhobo soMoya kuMisi esiMini nakwisiXeko saseMidi okanye kumzi mveliso webhasi yabakhenkethi kunye nabenzi | SONGZ
I-SZG Series, ye-6-8.4m yebhasi yedolophu kunye ne-5-8.9m yebhasi yabakhenkethi, i-AC yebhasi encinci kunye nebhasi midi
I-SZGK-ID (Ububanzi kwi-1826mm)
I-SZGZ-ID (Ububanzi kwi-1640mm)
SZGK-IF-D / SZGK-II-D / SZGK-II / FD / SZGK-III-D (Ububanzi kwi-1826mm)
SZGZ-IF-D / SZGZ-II-D / SZGZ-II / FD (Ububanzi kwi-1640mm)
SZG series luhlobo kophahla imvelaphi inyuselwa air conditioner. Isebenza kwi-bus ye-6-8.4m yedolophu kunye ne-5-8.9m yebhasi yabakhenkethi. Ukuze ube noluhlu olubanzi kakhulu lokusetyenziswa kweemodeli zebhasi, zimbini iintlobo zobubanzi boluhlu lwe-SZG, ngo-1826mm no-1640 ngokwahlukeneyo. Ngolwazi oluthe kratya nceda ujonge apha ngezantsi okanye unxibelelane nathi kule sales@shsongz.cn ngolwazi oluthe kratya.
Ukucaciswa kobuchwephesha beeBhasi A / C SZG Series:
Umzekelo (Uhlobo olumxinwa):
8 kW okanye 27296 Btu / h
12 kW okanye 40944 Btu / h
16 kW okanye 54592 Btu / h
10 kW okanye 34120 Btu / h
14 kW okanye 47768 Btu / h
18 kW okanye 61416 Btu / h
Umgama we-5.0 ~ 6.0 m
I-AK33 (TM31 iyanyanzeleka)
Imodeli (Inguqulelo ebanzi)
I-410 cc / r
Ngama-490 cc / r
Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZG-IX-D Ulwazi lwezoBugcisa be-SZGK-ID Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZGK-IF-D
Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZGK-II-D Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZGK-IIF-D Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZGK-III-D
Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZG-XD Ulwazi lwezoBugcisa be-SZGZ-ID Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZGZ-IF-D
Ulwazi lwezoBuchule lwe-SZGZ-II-D
3. Ukufudumeza umsebenzi, kunye nezinye izinto ezinokuzikhethela.
4. Isiguquli VALEO okanye AOKE siyazikhethela.
Imvelaphi ye-SZG ye-R & D yangasemva:
Ngokuphuculwa kwemigangatho yokuphila kwabantu, inqanaba lokuthuthuzela elifunekayo liya linyuka kwaye liphezulu, okukhokelela kwiimfuno ezingaphezulu nangakumbi ezingqongqo zezinto zokupholisa umoya kwi-OEM, kubandakanya ukubonakala kwesixhobo sokupholisa umoya, amandla okupholisa, ingxolo, njl. Uthotho lwe-SZG luyilelwe ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ngokusemandleni, ngokusekwe kukhuseleko lwendalo, amandla kunye nezinto zokonga, ukuphuculwa kokusebenza, ukunciphisa ubunzima, ingxolo ephantsi kunye nongcangcazelo, ukhuseleko kunye nokuthembeka, kunye nolondolozo oluhle. Iimveliso ezintsha ze-SONGZ zihlala ziphuhliswa ukuhlangabezana neemfuno zentengiso.
Ukwazisa ubuGcisa obunenkcukacha kwi-SZG Series ye-air Conditioner
1. Itekhnoloji ye-condenser esebenza ngokukuko
I-condenser ifakwe phezulu, inendawo enkulu ejonge umoya, kwaye ii-air inlets ziyilelwe kumacala omabini esigqubuthelo esiphezulu se-condenser, esiye sinciphise ukumelana nomoya we-condenser kwaye siphucule ukusebenza kobushushu.
Uyilo lwe condenser ngaphandle kwesakhiwo somoya esisezantsi. Ubude bebonke bemveliso abugqithi kwiimitha ezi-2.5. Ubume besakhiwo buhambelana. Uyilo olungentla lwenza ukukhanya kwemveliso kubunzima, kunye nevolumu encinci.
3. Ukusetyenziswa kobugcisa obuphezulu
I-SZGZ (umzimba omncinci) weemveliso, izinto ezikwigobolondo ezisezantsi zenziwe nge-LFT + yealuminium alloy material. Xa kuthelekiswa nezinye izinto ezidityanisiweyo, inokuqina okukhethekileyo okuphezulu kunye namandla athile, ukumelana nefuthe elifanelekileyo; ukuphucuka kokumelana nokuhamba, kunye nozinzo olulungileyo lweempawu. Ukuxhathisa kokudinwa kulunge, kwaye ubunzima bayo yonke imveliso bancitshiswa malunga ne-15%.
4. Kulula ukugcinwa
Isigqubuthelo esiphezulu se-SZG ububanzi bomzimba wothotho lwe-air conditioner sisebenzisa isakhiwo soqhagamshelo lwehenjisi. Akukho sidingo sokususa ipleyiti yonke xa kulayishwa isithuthi, esigcina ixesha lokufaka kakhulu. Ifeni yokufudumeza ifakwe phezulu, ngenxa yoko akukho mfuneko yokuvula isiciko xa ususa ifeni yokujija. Xa i-motor ekhuphukayo ilungiswa, kuyimfuneko kuphela ukuvula izembozo zecala, ezilula emva kwenkonzo yokuthengisa.
5. Uyilo loKhuseleko
Umqadi icala kophahla imvelaphi inyuselwa evaporator kuphelisa nisondelelane eziziisekondari, kwaye i-air indlela yebandla evaporator isebenzisa i ezintsha iqokobhe ezantsi edityanisiweyo isakhiwo ukugoba, nto leyo kuphela ukunciphisa ubunzima iyonke imveliso, kodwa ngempumelelo ukuthintela ingozi efihliweyo ukuvuza kwamanzi ngeentsuku zemvula.
6. Uluhlu olubanzi lwesicelo
Uluhlu olupheleleyo lwe-SZG lulungele iibhasi ukusuka kwi-6 ukuya kwi-8.4 yeemitha kunye nebhasi yabakhenkethi ukusuka kwi-5 ukuya kwi-8.9 yeemitha. Kwangelo xesha, ububanzi bebonke be-SZGZ (umzimba omxinwa) isixhobo sokupholisa kunye nokushiya indawo ekuphumeni komoya zi-180mm, eyi-120mm encinci kunomzimba obanzi, onokusetyenziswa kwibhasi encinci okanye encinci.
I-SZG Series Bus AC Imisebenzi yokuPhucula, ngokuzikhethela,
1. Itekhnoloji yokuHamba ngemibhobho kunye nobushushu
3. Isebenza kwiqondo lobushushu elisezantsi
Inokonyusa ifeni yokuncinitha kwaye isebenzise inkqubo ngokufanelekileyo, efanelekileyo i-10-12m ibhasi yomoya kwihlobo kwimimandla ebandayo enjengeMntla Yurophu.
Egqithileyo Inkqubo yoLawulo lweBhetter Thermal yeBhasi yoMbane, kunye noMqeqeshi
Okulandelayo: Isivavanyi soMoya ngebhasi, umqeqeshi, ibhasi yesikolo kunye neBhasi ecacisiweyo